Hordhaca Kulanka Finalka Copa America 2016 Ee Caawa Dhexmari Doona Argentina Iyo Chile | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Hordhaca Kulanka Finalka Copa America 2016 Ee Caawa Dhexmari Doona Argentina Iyo Chile
Hordhaca Kulanka Finalka Copa America 2016 Ee Caawa Dhexmari Doona Argentina Iyo Chile
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 26-06-16 11:43 AM Waxay noqon doontaa finalkii sannadkii lasoo dhaafay oo ku celis ah marka ay xulka Argentina foodda daraan xulka Chile ciyaarta kama dambeysta ah ee Copa America Centenario ee sannadkaan 2016 oo caawa oo Axad ah ka dhici doonta garoonka MetLife Stadium ee magaalada New Jersey ee dalka Mareykanka.
Xulalka Kulmaya: Argentina vs Chile
Saacadda: 3pm (Xilliga Geeska Africa)
Garoonka: MetLife Stadium (New Jersey)
Finalka Copa America Centenario 2016
Argentina ayaa finalka tartanka qarni jirsaday sannadkaan soo gaartay ka dib markii ay si xiriir ah u badisay dhammaan shan kulan oo ay illaa haatan ciyaartay tartankaan. Argentina, ayaa guusheedii ugu horreysay ee tartankaan waxay ka gaartay xulka ay caawa foodda isdarayaan ee Chile kuwaasoo ay 2-1 uga badisay ka dibna Panama ayey 5-0 uga badisay, iyagoo ka dibna cagta mariyey xulka Bolivia oo ay 3-0 uga badiyeen ciyaartoodii ugu dambeysay ee wareegga koowaad waxayna kaalinta koowaad uga soo baxeen Group D.
Argentina ayaana kulankoodii wareega sideed dhammaadka foodda daray xulka Venezuela kuwaasoo ay 4-1 uga adkaadeen, ka dibna waxay wareega afar dhammaadka isku arkeen martigeliyeyaasha tartankaan xulka qaranka USA ka dibna 4-0 ayey u dhiibeen, sidaas ayeyna finalka tartankaan kusoo gaareen sannadkii labaad oo xiriir ah.
La Albiceleste ayaa ciyaarahaas dhalisay 18 gool, waxaana laga dhaliyey keliya laba gool. Sida xoogan ee ay ku bilowdeen tartankaan ayaana u muuqata inay soo afjari karaan 23 sanno oo aysan xulkaani ku guuleysan koob weyn caawa oo Axad ah.
Dhanka kale, xulka Chile ayaa si hoose ku bilowday tartankaan iyagoo guuldarro kala kulmay Argentina kulankoodii furiraanka, laakiin laba guul oo isxiggay ayey ka gaareen xulalka Bolivia iyo Panama taasoo keentay inay kaalinta labaad uga soo baxaan Group D iyagoo ka dambeeyey xulka ay caawa ka hor imaanayaan.
Chile ayaa wareegga sideed dhammaadka tartankaan ku wajahday xulka Mexico ka dibna guul ayey kasoo gaareen mid ka mid ah guulaheedii ugu weynaa abid ee ay ka gaaraan Copa America ayeyna diiwaan gashadeen kulankaas iyagoo 7-1 uga badiyey xulka qaranka Mexico.
Kalsooni ayaa wixii intaas ka dambeeyey soo gashay xulkaan sida liidatay ku bilowday tartankaan. Wareeggii afar dhammaadka tartankaan waxay foodda dareen xulka Colombia laakiin waxay kusoo dhaafeen laba gool oo ay dhaliyeen qeybtii hore ee ciyaarta, sidaas ayeyna kusoo gaareen finalka Copa America iyagoo isha ku haya inay sannadkii labaad oo xiriir ah ka qaadaan isla xulka Argentina.
Tababaraha xulka Argentina Tata Martino ayaa qaba dhowr dhaawac oo uu ka welwelo ka hor kulankaan ay caawa oo Axad ah ka hor imaanayaan xulka ay sida weyn u xifaaltamaan ee Chile.
Angel Di Maria ayaa shaki weyn ku jiraa kulankaan isagoo la dhibtoonaya dhaawac gumaarka ah, halka Ezequiel Lavezzi oo buuxiyey booska Di Maria labadii kulan ee ugu dambeysay uu xusulka ka jabay isla markaana uu qalliin u baahday. Nicolas Gaitan ayaase diyaar u ah xulashada ka dib markii uu soo dhammeystay kulan gnaax ah, laakiin weli wuxuu la dhibtoonayaa inuu si buuxda taam u noqdo.
Sidaas darteed waa hubanti inuu Erik Lamela kusoo bilaaban doono kulankaan, lakaiin tababare Martino ayaa laga yaabaa inuu qaato go’aan geesinimo leh isagoo garab weerar ah u isticmaalaya Sergio Kun Aguero. Daafaca dambeedka bidix Marcos Rojo ayaa sidoo kale dhaawac yar qaba ka hor kulankaan, halka Augusto Fernandez uu dhaawac muruqa ah ku seegi doono finalka ka dhici doona magaalada New Jersey.
Dhanka kale xulka Chile, tababare Juan Antonio Pizzi ayaa isku shaandheeyey shaxdiisa kulan kasta oo wareegga bugbaxda tartankaan ah waxaase la filayaa inuu garoonka kusoo galo shax difaac ahaan adag maadaama uu doonayo inuu xakameeyo weerarka adag ee xulka Argentina.
Xulka Chile ma qabaan dhaawacyo ay ka welwelaan ka hor kulankaan mana jiraan ciyaartooy ganaax uga seegaya ciyaartaan, tababare Pizzi ayaana heysta koox dhammaan fayaqabta isla markaana uu kasoo xulan karo shaxdiisa ugu macquulsan ee uu guul ku gaari karo finalka koobka ugu weyn heer qaran ee laga ciyaaro qaaradda America.
Markii ay labadaan xul ku kulmeen finalkii Copa America sannadkii 2015kii, Chile ayaa ku guuleysatay koobka ka dib markii ay rigooreyaal ku badisay. Laba jeer ayeyna markaas ka dib kulmeen labadaan xul, Argentina ayaana labadaas kulan ku badisay natiijo min 2-1 ah.
Chile abid kama adkaan Argentina ciyaar sida caadiga ah 90 daqiiqo la ciyaaray shantoodii kulan ee ugu dambeeyey ee dhexmaray, La Albiceleste ayaana badisay afar ka mid ah ciyaarahaas.
Afar jeer ayey xulalkaaani ku kulmeen Copa America, Argentina ayaana badisay seddax ka mid ah ciyaarahaas, guuldarrada keliya ee kasoo gaartay Chile waxay aheyd middkii finalkii tartankaan ee sannadkii lasoo dhaafay.
Guud ahaan, Argentina ayaa badisay 12 ka mid ah 20 kulan oo ay ciyaareen labadaan xul, iyadoo Chile ay badisay afar kulan, afarta kulan ee kale ayaana barbardhac kusoo dhammaaday.